Is-diiwaangalin - Doorashada Guddoonka Golayaasha | KEYDMEDIA ENGLISH
Is-diiwaangalin - Doorashada Guddoonka Golayaasha
Senetarro ay ka mid yihiin Wasiirka Warfaafinta Cismaan Dubbe, Wasiirka Dastuurka, Saalax Axmed Jaamac, Guddoomiyihii hore Cabdi Xaashi iyo kuwo kale, ayaa si weyn ugu loollami doona, xilka Af-hayeenka Aqalka odayaasha.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddiga Doorashada Guddoonka Golayaasha Baarlamaanka 11-aad ee JFS, ayaa maanta billaabaya diiwaangelinta murashaxiinta u tartamaya xilka Guddoomiyaha iyo ku xigeennada Golaha shacabka iyo Aqalka Sare.
Sida ku cad jadwalka doorashada ee ay diyaariyeen Guddiga Qaban-qaabada, is-diiwaangalinta Murashixiinta ayaa socon doonta, muddo saddex maalin ah, laga billaabo maanta oo ku beegan 19 April ilaa 21 April, 2022.
Murashiixiintii ugu badnaa ayaa u taagan tartanka kuraasta Guddoonnada Labada Aqal, waxaana Guddoomiyaha Golaha Shacabka u taagan, Sheekh Aadan Madoobe, Shariif Cabdalla, Cabdullaahi Aadan Balack iyo Aadan Saransoor oo Koofur galbeed.
Sidoo kale, waxaa dhawaan inuu musharrax Guddoomiyaha Aqalka hoose yahay ku dhawaaqay, Xildhibaan Cabdirashiid Xiddig, oo laga soo doortay Juballand, kaasoo ay isku weel siyaasasadeed yihiin, Farmaajo iyo Deni, oo u taagan Xilka Madaxweynaha.
Cabdirashiid Xiddig, waxaa garbihiisa taagan siyaasiyiin ka soo jeeda Muqdisho, oo qaarkood ku jira Midowga Musharixiinta, xilli ay xusid mudan tahay in doorashadii Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee 2017, uu Xiddig la yimid, codod xooggan.
Dhanka kale, Senetarro ay ka mid yihiin Wasiirka Warfaafinta Cismaan Dubbe, Wasiirka Dastuurka, Saalax Axmed Jaamac, Guddoomiyihii hore Cabdi Xaashi iyo kuwo kale, ayaa si weyn ugu loollami doona, xilka Af-hayeenka Aqalka odayaasha.
Tartanka Guddoomiye ku xigeennada Labada Aqal, ayaa isna noqon doona mid xiiso leh, waxaana ilaa hadda ku dhawaaqay in ay u baratamayaan ku xigeennada Aqalka hoose, ku dhawaad 10 murasharax oo mucaarad iyo mucaafid isugu jira.
Sheekada xiisaha leh ayaa ah in Fahad Yaasiin oo doonaya inuu u tartamo kursiga Guddoomiye ku xigeynka Aqalka hoose, ay xaaladdu ku xuntahay, maadaama Guddiga doorashooyinka FEIT, diideen ansixinta natiijadii doorashadii boobka ahayd ee HOP086.
Fahad wuxuu maanta sugayaa go’aan ka soo baxa Maxakamadda sare, taasoo la filayo in ay soo saarto go’aan ay ugu hiilineyso, hayeeshee, Fahad ayaa u baahnaan doona inuu helo ID-ga Xildhibaannimo oo ku xirsan shahaada FEIT, taasoo inuu helo aysan suuragal ahayn.
Saddex maalin oo kaliya ayay socon doontaa diiwaangelinta murashaxiinta u tartamaya xilka Guddoomiyaha iyo ku xigeennada Golaha shacabka iyo Aqalka Sare, waana walwalka ugu weyn oo uu wajahayo Fahad, kaasoo laga yaabo inuu soo dhiso Khadiijo Diiriye.